राँगागाडी युगमा भद्रपुर नाका « Loktantrapost
राँगागाडी युगमा भद्रपुर नाका
२२ जेष्ठ २०७६, बुधबार १३:०१
भद्रपुुर (रासस) ः जतिबेला तराईमा मोटरगाडीको चलन आइसकेको थिएन, त्यसबेला सामान ढुवानीका लागि गोरुगाडा वा राँगागाडाको विकल्प थिएन । हरेक किसान र व्यापारीसँग गाडा हुन्थे । किसानहरु खेतमा गोबर मल लैजान, पाकेको बाली घर भित्र्याउन र राइस मिलमा कुटानी पिसानीको लागि धान लैजान राँगागाडीको प्रयोग गर्थे । पहिला पहिला विहेमा जन्ती लैजान र बेहुलाबेहुली बोक्न समेत गोरुगाडीको प्रयोग गर्ने चलन थियो ।
अहिले प्रविधिको विकासले चलन फेरिएको छ । गोरुगाडा वा राँगागाडा अब इतिहास भइसके । कार, जिप, ट्रक र ट्रयाक्टर व्यापक हुँदै गएपछि जनावरले तान्ने गाडीहरु प्रायः गायब भएका छन् । तर यतिबेला भद्रपुर भन्सार कार्यालय या छेवैको मेची पुलमा पुग्यो भने सामान लोड र अनलोड गर्न भ्याइनभ्याई अवस्थामा राँगागाडीको एक दर्जन जतिको लस्कर देख्न पाइनेछ ।
व्यापारीहरुले भारतको कोलकाता, सिलीगुढी, मुम्बईदेखि आयात गरेर नेपाल ल्याएका सामाग्रीहरु भारतको विहारस्थित गलगलिया नाकाबाट राँगागाडीमा लोड गरेर भद्रपुर भन्सार ल्याउने गरेका छन् । मोटरको बाटो सहज नभएको कारण व्यापारीहरुसँग राँगागाडीमा ढुवानी गर्नुको विकल्प पनि छैन ।
दुई देशविचको नाकामा आजको एक्काइसौं शताब्दीमा राँगागाडीमा सामान ओसारपसार गर्नु व्यापारीहरुको रहर होइन । भारत विहारको गलगलिया र नेपालको भद्रपुर जोड्ने मेची नदीमा हालै निर्माण गरिएको पक्की पुल सञ्चालनमा आए पनि भारतले आफ्नो भागतिरको ४ सय मिटर बाटो नबनाइदिदा ढुवानीका लागि ट्रक, जिप, ट्रयाक्टर आदि साधन प्रयोग गर्न सकिएको छैन । सामान ल्याउनै पर्ने बाध्यताका कारण व्यापारीहरुले पहिल्यैदेखिको राँगागाडी रोज्न बाध्य भएका हुन् ।
‘पहिले बाटो थियो पुल थिएन, अहिले पुल बन्यो बाटो छैन’, भद्रपुर नगरपालिका–५ का कपडा व्यापारी सन्जीव घोष भन्नुहुुन्छ, ‘गलगलिया भन्सारमा चेकजाँच गराएर राँगागाडीमा सामान नेपाल भित्र्याउनु पर्दाको सकस हामीलाई मात्र थाहा छ, भारतले बाटो बनाइदिए सुविधा हुनेथियो ।’
उहाँले एकपटकमा राँगागाडीमा दश पोका कपडा ल्याउने गरेको बताउनुभयो । सय पोका गाडीमा एकैपटकमा ल्याउन पाएको भए दुई चार हजार रुपैयाँ भाडामा खर्च हुने उनको भनाई छ । तर अहिले उहाँले दश पोका दश पटकमा राँगागाडीमा ओसार्नु परिरहेको छ । उहाँले राँगागाडीलाई प्रति पोका रु. एक सय पचास तिर्ने गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले मेची पुल बने पनि भारतीय सीमा क्षेत्रमा बाटो नहुँदा यस्तो सास्ती खेप्नु परेको बताउनुभयो । उहाँ भद्रपुर भन्सार कार्यालयमा सबैभन्दा बढी राजस्व बुझाउने व्यापारी मध्येमा आफू रहेको दाबी गर्नुहुन्छ ।
नेपालतर्फ सुविधा सम्पन्न पुल र बाटो निर्माण भए पनि भारततर्फ समानस्तरको भन्सार र सडकको सुविधा छैन । गत माघ १७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मेची पुलको उद्घाटन गर्नुभएको थियो । पुल बनेपछि भद्रपुर भन्सारबाट व्यापार बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर भारततिर सडक अधुरै हुँदा व्यापार अपेक्षित रुपमा बढ्न सकेको छैन ।
मेची पुलको पूर्वी छेउबाट डेढ सय मिटरसम्म नेपालकै भूभाग पर्दछ । पुलको मुख भारतको पश्चिम बङ्गाल र विहार प्रान्तको सीमा क्षेत्रमा परेको कारण सडक कुन प्रान्ततिर लैजाने भन्नेमा भारतमा विवाद कायमै रहँदा सडकको निर्माण हुन नसकेको बुझिएको छ ।
भद्रपुर बजारमा फलामको व्यापार गर्दै आउनुभएका सुरेश साहले सिलिगुढीबाट सामान खरिद गरेर गलगलियासम्म गाडीमा ल्याउने गरेको र नेपालतर्फ चाहिँ प्रति राँगागाडी भारु रु. ४०० तिरेर ढुवानी गर्दै आएको बताउनुभयो । उहाँले भारततर्फ बाटो बनिएको भए सो सामान रु. २०० तिर्दा नेपाल ल्याउन सकिने बताउनुभयो ।
झापा उद्योग बाणिज्य सङ्घका महासचिव पङ्कज शर्माले व्यापारीले पुल बन्दा पनि र नबन्दा पनि उस्तै समस्या भोगिरहनु विडम्बना भएको बताउनुभयो । उहाँले बाटो अभावमा पिकअप भ्यान, ट्रक र कन्टेनर नआउँदा व्यापारीहरुले भारतबाट आयात गरिने सामान ल्याउन राँगा गाडीको प्रयोग गरेको बताउनुभयो ।
भद्रपुर भन्सार कार्यालयका प्रमुख फडिन्द्र खतिवडाले सुरु सुरुमा आफु भन्सार कार्यालयमा आउँदा सामान लोड–अनलोड गरिरहेका राँगागाडी देखेर छक्क परेको तर अहिले सामान्य लाग्न थालेको बताउनुभयो । व्यापारीहरुले सामान राँगा गाडीमा नै ल्याएर भन्सारको गोदाममा राख्ने गरेको बताउनुभयो । उहाँले भारतीय भन्सारमा प्रक्रिया पूरा गरेर राँगा गाडीमा सामान नेपाल ल्याएर राजस्व बुझाउने गरेको बताउनुभयो ।
‘भारतीय पक्षले बाटो बनाउनका लागि डीपीआर गरिसकेको थाहा भएको छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘पुल बनिसकेर पनि भारततिर लिङ्करोड नहुँदा समस्या भएको हो, चाँडै समाधान हुने अपेक्षा छ ।’
भद्रपुर भन्सारलाई सरकारले स्तरोन्नति गरेर १० महिना अघि पूर्ण भन्सारको मान्यता दिएको थियो । गत आठ महिनामा यो भन्सारले रु. १३ करोड २१ लाख राजस्व सङ्कलन समेत गरिसकेको छ । भारततिर लिङ्करोड बनेमा व्यापार सहज हुनाको साथै राजस्व सङ्कलन निकै बढ्ने भन्सार प्रमुख खतिवडा बताउनुहुन्छ ।
कुनै बेला नेपालकै मुख्य तीन भन्सारमा गणना हुने भद्रपुर भन्सार पूर्वपश्चि राजमार्गको निर्माणसँगै मेची पुल काँकडभिट्टामा बनेपछि मृतशहर जस्तै भएको थियो । उद्योग व्यापार सुस्ताएको थियो । लामो प्रयासपछि मेचीमा पक्की पुल बनेकाले भद्रपुरबासीले आर्थिक चहलपहल बढ््ने आशा गरेका थिए । तर भारतले पुल जोड्ने ४०० मिटर सडक नबनाइदिदा भद्रपुरको सपना अधुरै मात्र भएको छैन, फेरि राँगागाडीको युगमै फर्किनु परेको छ ।
काठमाडौं र मोरङपछि बढी जनसंख्या झापामा
साठी वर्षपछि चुच्चे नक्साको जनगणना
झापा, १२ माघ । साठी वर्षपछि पहिलोपल्ट चुच्चे नक्सामा समेटिएको नेपाली भूभागको जनगणना सम्पन्न भएको छ ।